Soomaaliya, 17 March 2019
10 ku Dhimatay Dagaal ka Socda Sh. Dhexe
Sida ay sheegayaan wararka degaanka laga helayo dagaalka ayaa saaka waabarigii ka bilaawday tuulo lagu magacaabo Burdheere halkaas oo sannadahii ugu dambeyay uu ka taagnaa muran dhuleed u dhaxeyay beelaha ay malayshiyaadkoodu dagaalamayaan.
Md. Geelle oo Booqday Muqdisho
Madaxweynaha Wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray Magaalada Mqudisho,waxaana garoonka ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxmaed Cabdulaahi Farmaajo.
Sarkaal Alshabab ah oo lagu Dilay Yaaq-bariweyne
Wararka ka imaanaya deegaanka Yaaq beriweyne ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay xiisad dagaal ka taagneyd ilaa iyo shalay, ka dib markii maleeshiyo gacan saar la leh ciidamada dowladda ay halkaa ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyada al- Shabab.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan qubanayaal ay ku jiraan dadkii ku dhintay dayuuraddii Ethiopian Airlines iyo dagaal ka dhacay gobolka Mudug
Faaqidaadda Toddobaadka: Amniga Muqdisho
Shirka jihaynta siyaasadda Puntland oo lasoo geba-gebeeyey
Magaalada Garowe ee xarunta Puntland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir halkaasi ka socday oo looga hadlayay jiheynta siyaasadda xukuumadda Puntland.
Qarax ka dhashay baabuur walxaha qarxa lagu xiray ayaa maanta ka dhacay isgoyska Shaqaalaha ee waddada Makka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho.
Laascaanood: Maxkamad gabar ka furtay nin lagu qasbay
Bandhigga VOA: Garaacista carruurta ee dugsiyada
Qarax dhimasho badan oo ka dhacay Baay
Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay ku dhawaad 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay deegaanka Goof-gaduud Buurey ee gobolka Baay, oo qiyaastii 30km u jira magaalada Baydhabo.